Ukupelwa kabi ... kweGarcía Márquez enkulu | Izincwadi Zamanje
Akekho ophunyuka kulokho UGabriel García Márquez Ingenye yezinkulu kakhulu ababhali lokho okunikezwe ubuntu ... lokho kungazibophezela.
Eqinisweni, umbhali ngokwakhe waveza imizwa yakhe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa evuna ukwenza ushintsho olimini ukuze enze lula i- isipelingi ngakho-ke lokhu bekungeyona enye yezinto ezesabekayo zabesilisa nabesifazane kusukela ekuzalweni kuze kube sekufeni.
Kodwa-ke, wayithatha ngokuhlekisa, naku-biography yakhe "Phila ukutshela" Usishiyele i-anecdote enhle evela kumngane wakhe ehlobene ngqo nalokho esikutshela wena futhi lokho kuhle impela.
U-Andres Bello, isazi semilingo esibaluleke kakhulu, wayebhalela umngane wakhe owayenamaphutha amakhulu esipelingi. Ngelinye ilanga, ngemuva kokuchitha intambama ndawonye, ​​umngani wavalelisa kuye wathi: "Kuleli sonto ngizokubhalela nakanjani." UBello waphendula, “Ungawuthathi lowo msebenzi! Ngibhalele njengenjwayelo ”.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » UGarcía Márquez nokungaphuthelwa kahle
URuben G Codosero kusho
Ukwenza lula isipelingi kungafana nokususa imibala kupende. Ama-nuances, ukwakheka, ukunotha kuzolahleka.
Phendula uRuben G Codosero
UDon Perrote kusho
Kubonakala kimi ukuthi u-Andrés Bello okukhulunywa ngaye ku-anecdote ngudokotela wezifundo zengqondo waseVenezuela (1781-1865) hhayi umngani kaGarcía Márquez.
Phendula uDon Perrote
UHernán Victor Sosa Delgado kusho
Kufanele kube nguyena, uGarcía Marquez, umngani ka-Andrés Bello akhuluma ngaye.
Phendula uHernán Víctor Sosa Delgado
UHenrique Berrocal kusho
Kuyaduduza ukuthi uGarcía Márquez uhlushwa isipelingi esibi, bathi.
Kwesinye isikhathi ngike ngabona izimpendulo zilulaza umbhali ngokupela okuthile okungalungile, ngaphandle kokusho nomqondo oveziwe.
Kungafana nokuthi sithi thina bantu abangenalwazi nabangenalwazi asikwazi ukuba nemibono efanelekile, ngoba asazi ukuthi sizoyiveza kanjani kahle.
Phendula ku-Henrique Berrocal
Yuri Esmeralda kusho
Kwenzeka kimi lapho ngibhala ama-anecdotes ngempilo yami! Ngiyamthanda uGabrielito: 3 kimi ungumbhali wezwe ohamba phambili
Phendula u-Yuri Esmeralda
Raven Charity kusho
Iziphonso ziyafundwa, kepha ithalente alifundwa.
Imibono ilungile, ngoba nami nginayo leyo nkinga yokupela isipelingi, futhi ngiyaqhubeka nokubhala ngaphandle kokukhathalela, ngoba imibono yami ayigugu.
Amathalente obuciko nobuhlakani buthathwa futhi buhlonishwe ngemuva kokufa iningi, empilweni bathathwa njengabasangene futhi abanakwa.
Kuyiqiniso ukuthi okukhuthaza ubuhlakani bethu ubuhlungu nokwaliwa kwabantu, okungenani kimi kunjalo.
Phendula uCaridad Cuervo
hugo valencia m kusho
Umngani u-Andrés Bello hhayi owakwaGarcía Márquez, funda futhi.
Phendula uhugo valencia m
Eqinisweni, ubhekisa kuye njengomngane njengoba ethi: ku-biography yakhe ethi "Vivir para tallo" wasishiyela i-anecdote enkulu evela kumngane wakhe ehlobene ngqo nalokhu.